Ukuguqulelwa - I-Foundation Foundation • Isingeniso ekucingeni nasekufeni
Siyavuya ukukunikeza uguqulelo oluzenzekelayo lwalo lonke umxholo we-HTML kwiwebhusayithi yethu. Iinguqulelo zenziwa yikhompyuter kwaye ziyafumaneka ngeelwimi ze-100. Oku kuthetha ukuba yonke imisebenzi kaHarold W. Percival ngoku inokufundwa ngabantu abaninzi emhlabeni ngolwimi lwabo lwenkobe. Iinguqulelo zePDF zeencwadi zePercival kunye nezinye iincwadi azibhalileyo zihlala zisiNgesi kuphela. Ezi fayile ziyimpendulo yemisebenzi yantlandlolo, kwaye olu hlobo lokuchaneka akulindelekile kwiinguqulelo ezizenzekelayo.
Kwikona engezantsi ngasekunene kwephepha ngalinye, kukho ulwimi olukhethayo oluya kukuvumela ukuba uguqulele iphepha kulwimi olukhethileyo:
Ngokucofa kukhetho, unokukhetha ulwimi onqwenela ukulufunda.
Sikwazisela intshayelelo UkuCinga nokuPhelela ngeilwimi ezimbalwa apho amavolontiya eza ngaphambili ukuyila. Zidweliswe apha ngezantsi ngokwealfabhethi.
Esi sahluko sokuqala sazisa ngeminye yemicimbi ekuthethwa ngayo encwadini. Inika umfundi kwangoko umxholo kunye nebhodi yokubhala yencwadi yonke. Ngenxa yale nto, sinika ukuguqulelwa komgangatho wobuntu kwiNtshayelelo xa sinako. Sinombulelo ongazenzisiyo kubavolontiya abaye banceda ILizwi leSiseko benza ukuguqulelwa kwesi sahluko sokuqala. Nceda uqhakamshelane nathi ukuba ungathanda ukufaka isandla ekuguquleleni intshayelelo kwezinye iilwimi.
Deutsch: Einleitung von Denken und Bestimmung (IsiJamani: Isingeniso UkuCinga nokuPhelela)
Esperanto: Enkonduko al Pensado kaj Destinado (IsiSperanto: Isingeniso UkuCinga nokuPhelela)
Nederlands: Inleiding tot Denken en Bestemming (IsiDutch: Intshayelelo UkuCinga nokuPhelela)
Русский: Введение в Мышление и судьба (IsiRashiya: Intshayelelo UkuCinga nokuPhelela)
Zininzi zezifundo ziya kubonakala zingalindelekanga. Abanye babo banokumangalisa. Unokufumanisa ukuba bonke bakhuthaza ukucingisisa. HW Percival